Baolina kitra – Barea any ivelany :: Nisongadina ny ekipan-dry Morel sy Dupuis ary Abel Anicet • AoRaha
Baolina kitra – Barea any ivelany Nisongadina ny ekipan-dry Morel sy Dupuis ary Abel Anicet
Nizara roa ny vokatra teo amin’ireo mpilalao malagasy nandrafitra ny ekipam-pirenena baolina kitra na ny Barea, izay niatrika ny fiadiana ny Amboaran’i Afrika, ka mila ravinahitra any ivelany, taorian’ny fifaninanana tany Ejipta tamin’ny volana jolay lasa teo. Isan’ireo nisongadina tamin’ny faran’ny herinandro i Jeremy Morel, rehefa nahafaty ny baolina voalohany ho azy teo amin’ny fifaninanam-pirenena frantsay (Ligue 1).
Teo amin’ny minitra fahenina no tafiditr’ity vodilaharan’ny Rennes ity ny baolina nitondra fandresena ho azy ireo nanoloana ny Montpelier Hérault SC, tamin’ny andro voalohany. Isan’ireo klioba valo nibata fandresena ny Rennes tamin’izany. Izy ireo no mitana ny laharana fahavalo vonjimaika.
Tafavoaka ho mpandresy indray ny ekipan’ny FC Fleury 91, tantanin’i Nicolas Dupuis (mpanazatra nasionaly malagasy), tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo, nandritra ny fifaninanam-pirenena frantsay “National 2”. Niondrika teo anatrehan’izy ireo tamin’ny isa 2 noho 0 ny ekipan’ny CMS Oissel, teo amin’ny lalao ho an’ny vondrona B misy azy ireo. Mitana ny laharana faharoa vonjimaika amin’ireo ekipa enina ambin’ny folo ny FC Fleury 91 misy an-dry Rakotoharimalala Njiva sy Randriambololona Zotsara, ankehitriny. Mbola tsy isan’ireo niatrika an’io lalao io izy mirahalahy izay nosintomin’i Nicolas Dupuis hanaraka azy ireo.
“Sarotra ny lalao tamina kianja ratsy niampy ny toetrandro nandrivotra ka tsy nahafahanay nampiseho ny tena filalaonay. Nandresy izahay saingy tokony ho tsaratsara kokoa ny vokatra fa tsy 2 noho 0 monja”, hoy i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny FC Fleury 91, tamin’ny resaka nifanaovany tamin’ny mpanao gazety frantsay, taorian’ny lalao.
Mitarika vonjimaika indray any amin’ny fifaninanam-pirenen’i Bolgaria ny ekipan’ny Ludogorets Razgrad, misy an’i Abel Anicet Andrianantenaina, rehefa avy nihintsana teo amin’ny fihodinana voalohany tamin’ny fifanintsanana hiatrehana ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa. Fandresena telo sy ady sahala roa no azon’izy ireo amin’izao andro fahadimy. Manana isa 11 ity tompondakan’i Bolgaria imbalo nisesy (2012 – 2019) ity.
Nahavita nanasahala ny isa nitarihan’ny Lorient FC azy ireo kosa ny AS Nancy Lorraine, misy an’i Thomas Fontaine (vodilaharan’ny Barean’i Madagasikara), tamin’ny andro voalohany ho an’ny fifaninanam-pirenena frantsay (Ligue 2).
Mpilalaon’ny Barea ratsiratsy vokatra indray i Nomenjanahary Lalaina na i Bolida, mila ravinahitra ao amin’ny Paris FC. Lavon’ny Rodez tamin’ny isa 2 noho 1 ity ekipan’ny renivohitr’i Frantsa ity, tamin’ny andro fahatelo ho an’ny “Ligue 2”. Laharana faha-18 amin’ireo ekipa sivy ambin’ny folo ny ekipan’i Bolida, amin’izao fotoana izao. Ady sahala tokana nanoloana ny Sochaux (1 – 1) no vokatra tsara indrindra vitan’izy ireo hatramin’izao fotoana izao. Efa montsan’i Lorient tamin’ny isa 3 noho 0 izy ireo tamin’ny andro voalohany.
Basket-ball lalaovin’olona telo :: Lasan’ny Coup de Pouce sy Avengers ny amboara
Baolina lavalava – Vehivavy :: Hitsapa ny ekipa afrikana tatsimo ny Makis, anio